Gazety - Fikambanan'ny ivon-toerana manoratra iraisam-pirenena
CFP ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny Internet IWCA 2022 - Manavao sy mivoatra
IWCA no trano fandaminana ho an'ny diary fanoratana roa: Gazety fanoratana Center ary Ny famerenana ny peer.
Gazety fanoratana Center no journal fikarohana voalohany an'ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana hatramin'ny 1980. Mivoaka indroa isan-taona ny gazety.
Hafatra iray avy amin'ny tonian-dahatsoratra ankehitriny, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg, ary tonian-dahatsoratry ny boky Steve Price:
Manolo-tena izahay amin'ny famoahana fikarohana mahery vaika sy vatsim-pianarana teôria mifandraika amin'ny foibe fanoratana. Ho fanampin'izay, izahay dia mitady hanangana vondrom-pikarohana fikarohana matanjaka kokoa ho an'ireo ivon-toerana fanoratana. Ho amin'izany, manolo-tena hanao fampiharana telo lehibe izahay. Isika dia ho:
· Manomeza valiny mahasoa amin'ny sora-tanana rehetra, anisan'izany ireo izay tsy ekentsika holavina.
· Ataovy izay ahafahantsika miditra sy azo idirana amin'ny kaonferansa fanoratana isam-paritra sy iraisam-pirenena.
· Mandrindra hetsika fampandrosoana matihanina mifandraika amin'ny The Writing Center Journal ary ny vondron'olona mpikaroka ao aminay.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny diary, ao anatin'izany ny fomba fandefasana lahatsoratra na famerenana hodinihina, midira azafady WCJtranokala: http://www.writingcenterjournal.org/.
WCJ azo ampiana amin'ny anao Kitapo mpikambana IWCA.
WCJ misy lahatsoratra feno avy JSTOR nanomboka tamin'ny 1980 (1.1) ka hatramin'ny laharana farany.
Fomba hafa hidirana WCJ hita ao amin'ny tranonkala: http://www.writingcenterjournal.org/find/
TPR dia tranonkala an-tserasera feno, fidirana malalaka, multimodaly ary fiteny maro fiteny ho fampiroboroboana ny vatsim-pianarana ataon'ny mpianatra nahazo diplaoma, mpianatra ary mpianatra amin'ny lisea ary ireo mpiara-miasa aminy.
Fifandraisana ho an'ny TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR ao amin'ny tranonkala: http://thepeerreview-iwca.org
Raha mila fanazavana momba ny Newsletter IWCA, Fanavaozana IWCAdia tsidiho ny Eto. Raha mila fanazavana momba ireo zavatra vita an-tsoratra hafa mifantoka amin'ny vatsim-pianarana fanoratana dia tsidiho ny loharanos page.